Baolina kitra – Amboaran’ny KAF :: Hanainga ho any Afrika Atsimo ihany ny CNAPS Sport • AoRaha
Baolina kitra – Amboaran’ny KAF Hanainga ho any Afrika Atsimo ihany ny CNAPS Sport
Na dia tsy mbola milamina aza ny toe-draharaha any Afrika Atsimo hatramin’izao noho ny savorovoro ateraky ny famonoana ireo vahiny hataon’ireo teratany any dia handeha hiatrika ny lalao any amin’ity firenena ity ny Cnaps Sport.
Hanainga rahampitso izy ireo amin’ny lalao hataony manoloana ny TS Galaxy amin’ny alahady ho avy izao ao anatin’ny lalao mandroso amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Kaonfederasioan afrikanina (Caf).
“Nahazo taratasy izahay fa azo antoka ny fandriampahalemanay. Hisahana izany ny Federasiona afrikanina sy ny klioba TS Galaxy”, hoy Andriambololona Tipeh, mpanazatra ny Cnaps Sport.
Nampahafantarina mialoha an’ity klioba avy any Itasy ity fa hizotra araka ny tokony ho izy ny fihaonana. Hanatanteraka ny fanazarantenany farany, iray andro mialohan’ny lalao araka ny fitsipiky ny fifaninanana iraisam-pirenena, ny Cnaps Sport. “Mbola tsy milamina any Afrika Atsimo kanefa atao ahoana fa efa io aloha ny zava-misy. Vonona ny mpilalao malagasy hiatrika ny fifaninanana”, araka ny fanazavan’itsy mpanazatra itsy hatrany.
Voatery mionona amin’ny lalao ara-pirahalahina ireo klioba malagasy miatrika ny lalao afrikanina isan-tarika. Miisa roa ambin’ny folo ireo fihaonana nataon’ny Cnaps Sport nentin’izy ireo nanomanan-tena. Nifandona ara-pirahalahina farany tamin’ny Net Foot izy ireo tany amin’ny kianja Vontovorona omaly, mialoha ny tena handehanana any Afrika Atsimo. “Fakàna toky farany iny fihaonana tamin’ny Net Foot iny noho ny tsy fitovian’ny haavo teknika eo amin’ny ekipa roa tonta. Nentin’ireo mpilalaon’ny Cnaps Sport nampihatra ireo lesona azo nandritra ny fampivondronana ihany koa”, hoy ny mpanazatran’izy ireo.
Ny lafiny fanafihana no tena nohamafisina nandritra ny fanazarantena raha ny fanazavan’i Andriambololona Tipeh. Tafavoaka mpandresy nanoloana ny Net Foot tamin’ny isa 7 noho 0 izy ireo omaly. Nohazavainy fa: “tsy ny isan’ny baolina maty no nojerena fa ny fomba nampidiran’ny mpilalao an’ireo baolina fito. Nohamafisina ihany koa ny fandaminana tany amin’ny lafiny fanafihana”.